Apple hụrụ nke mbụ ya na oghere nke ụlọ ahịa atọ gburugburu ụwa | Esi m mac
Apple hụrụ nke mbụ ya na oghere nke ụlọ ahịa atọ gburugburu ụwa
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, anyị na-ekwurịta banyere mmeghe nke ụlọ ahịa Apple ọhụrụ na ogbe ndịda Cologne. N'ezie, n'izu gara aga anyị bipụtara foto mbụ na ụlọ ahịa German ọhụrụ. Mana ọ bụghị oghere ikpeazụ nke Apple ụbọchị ndị a. A na-agbakwunye ụlọ ahịa ọhụrụ na Miami (Florida) na ụlọ ahịa Nanjing Jinmao na China na ndepụta nke ụlọ ahịa n'ụwa niile.
Miamilọ ahịa Miami, na-azọrọ na-abụ ndị kasị ibu oruru nke ọhụrụ azụmahịa center meghere na obodo nke Brickell. E nwere nnukwu atụmanya na mmeghe nke ụlọ ahịa ahụ, dị ka a pụrụ ịhụ na Twitter, dịka nnukwu igwe mmadụ kesara oge mmeghe.
Na mgbakwunye na snapshots, anyị nwere ike ịlele ụfọdụ vidiyo nke ndị ahịa Apple bulitere n'oge mmeghe ụlọ ahịa ahụ.
Storelọ Ahịa Apple na-emepe Brickell city center Shelia Ferguson Gasson na Jane Gregoire Youngberg na Dan Youngberg
Edere site George gasson na Satọdee, Machị 25, 2017
N'aka nke ọzọ Apple anaghị egbusi oge ma mepee ụlọ ahịa ọzọ na Nanjing Jinmao Ebe, n'ikpere mmiri nke Xuanwu Lake. Anyị enweghị ọtụtụ ozi gbasara oghere a dịka nke emere na Colonia ma ọ bụ Miami, mana ihe na-enye anyị ohere ịmata bụ oghere ụlọ ahịa na ụdị Apple kachasị ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple hụrụ nke mbụ ya na oghere nke ụlọ ahịa atọ gburugburu ụwa
Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ Apple na-akpọ 1 "ọdụ ọdụ redio kachasị elu n'ụwa"
iPhone (PRODUCT) RED, macOS 8 beta 10.12.4, AirPods case protector, iTunes 12.6, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac